दक्षिण भारतीय (साउथ इण्डियन) सिने उद्योगले तिब्र गतिमा प्रगति हासिल गरिरहेको छ । त्यहाँ बर्षेनी वर्षेनी ठूलो संख्यामा तामिल, तेलगु, कन्नडा र मलायालम भाषाका फिल्महरु निर्माण हुने गरेका छन् । बाहुबल...
काठमाडौं १ चैत । राष्ट्र बैंकले फेरि सय माथिका भारतीय नोट चलाउने तयारी गरेको छ । भारु सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्धको सूचना सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि फेरि ती नोट चलाउने तयारी गरिएको ...
एजेन्सी, बाहुबली सिरिज बनाएर चौतर्फी चर्चा कमाएका एसएस राजामौलीले बनाएको नयाँ फिल्म ‘आर आर आर’ को पहिलो लुक्स सार्वजनिक भएको छ । ४०० करोडको बजेटमा बन्ने यस फिल्ममा अजय देवगन, राम चरण, आरटि राम राव,...
‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’संगै ‘पुरानो बुलेट’ र ‘जानी नजानी’ प्रदर्शनमा
चैत १, २०७५ काठमाडौं- नेपालमा हरेक हप्ता दुईदेखी तीन नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आउने गरेका छन् । हलमा फिल्मको ब्यापार ओरालो लागिरहेको अवस्थामा पनि फिल्म प्रदर्शनमा कमी आउन सकेको छैन । अघिल्लो हप्ता ‘...
काठमाडौँ – राष्ट्र बैंकले फेरि सय माथिका भारतीय नोट चलाउने तयारी गरेको छ । भारु सयभन्दा ठूला दरका नोट चलनचल्तीमा प्रतिबन्धको सूचना सार्वजनिक गरेको एक महिनापछि फेरि ती नोट चलाउने तयारी गरिएको हो । ...
‘बाहुबली’ निर्देशक राजमौलीको ‘RRR’बाट साउथ फिल्ममा आलियाको डेब्यु, अजय देवगन पनि जोडिएका छन् !
काठमाडौं । ‘बाहुबली’ फिल्म जस्तो ब्लकबस्टर फिल्म बनाइसकेका निर्देशक एसएस राजमौलीले मल्टिस्टार फिल्म ‘RRR’ निर्माणको घोषणा गरेका छन् । हैदरबादमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्देशक राजमौलीले फिल्मको घोषणास...
नेपालमा आइसी १०० भन्दा माथिको कारोवार खुलाउन भारतको आग्रह, के गर्ला नेपाल राष्ट्र बैंक ?
काठमाडौं – भारतले उच्च दरका भारतीय रुपैयाँ नेपालमा खुला गर्न नेपाललाई आग्रह गरेको छ । भारु १०० भन्दा ठूला अंकका नोट नेपालभर चलन चल्ती गर्न नेपाल सरकारले रोक लगाएको तीन महिना पनि नवित्दै भारतले यस्त...
फ्राइडे रिलिज : तीन फिल्ममा ८ कराेड लगानी, डुब्ला या उत्रेला?
काठमाडौं– शुक्रबारबाट नेपाली फिल्म हलहरुमा ३ वटा नयाँ फिल्म प्रदर्शनमा आएका छन्। ‘पुरानो बुलेट’, ‘जानी नजानी’ र ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ आजबाट प्रर्दशनमा आएका हुन्। ‘द म्यान फ्रम काठमाडौं’ पहिलो...
काठमाडौं – रिलिज भएका फिल्मले ब्यवसाय गर्न नसकेको यर्थात जान्दा जान्दै पनि निर्माता निर्देशक फिल्म जुदाउन पछि पर्दैन् । आज शुक्रबारबाट एकसाथ तीन फिल्म प्रदर्शनमा आउनुले पनि यो कुराको पुष्टी गरेको छ...